Ao amin'ny Taratasy fampahalalana momba ny kolontsaina any Ota Ward "ART bee HIVE" navoakan'ny Fikambanana fampiroboroboana ny kolontsaina Ota Ward, ny mpitati-baovao ao amin'ny paroasy "Mitsubachi Corps" dia hitantara hetsika ara-kolontsaina sy ara-javakanto!
Aza misalasala manantona anay amin'ny fandrakofana na fampahalalana momba ny hetsika mifandraika amin'ny kolontsaina sy ny zavakanto, toy ny hetsika zava-kanto, hetsika fanaparitahana zavakanto, ary toerana misy zavakanto.
Mitady fangatahana fandrakofana sy fanomezana vaovao!
Ao amin'ny taratasy fampahalalana "ART bee HIVE", ny mpitati-baovao ao amin'ny paroasy "Mitsubachi Corps" dia hitantara hetsika ara-kolontsaina sy ara-javakanto!Aza misalasala manantona anay amin'ny fandrakofana na fampahalalana momba ny hetsika mifandraika amin'ny kolontsaina sy ny zavakanto, toy ny hetsika zava-kanto, hetsika fanaparitahana zavakanto, ary toerana misy zavakanto.
* Hanapahana hevitra ny famoahana aorian'ny fivoriana fanontana.Miankina amin'ny atiny sy ny habaka, mety tsy afaka mamoaka izahay.Aza hadino fa.
· Fiaraha-mientan'ny fikambanana ara-kolontsaina sy zavakanto ary olona miorina ao amin'ny Ota Ward sy ny manodidina ny Ota Ward
· Hetsika kolontsaina sy zavakanto izay andraisan'ny mpianatra fiainana, miasa ary mianatra any Ota Ward anjara
· Ireo hetsika izay tsy tafiditra ao anatin'ny sehatry ny famoahana
1. XNUMX.Fandraisana natokana ho an'ny pejy fandraisana
3. XNUMX.Ota Citizen's Plaza, Ota Citizen's Hall Aplico, Ota Bunkanomori Isam-baravarankely
Fandraisana natokana ho an'ny pejy fandraisana
(1) Ireo entana mety hanimba ny toetran'ny besinimaro sy ny fahamendrehan'ny fikambanana
(2) hetsika ara-politika, ara-pivavahana, hevitra ary fampiroboroboana ny tena manokana
(3) Izay rehetra mifanohitra amin'ny filaminam-bahoaka sy ny fahalalam-pomba ary ny fomba amam-panao
(4) Orinasa izay iharan'ny lalàna mifehy ny fandraharahana amin'ny ladoany, sns. Ary ny fanatsarana ny asa aman-draharaha (lalàna laharana faha-23 amin'ny 7 jolay 10)
(5) Ireo zavatra voararan'ny lalàna na mety handika ny lalàna
(6) Ny hafa izay ekena fa manana olana manokana amin'ny tombontsoam-bahoaka
Tsindrio eto raha mila fampiasa momba ny fangatahana / vatsy